Katedralin'i Santiago, katedralin'ny metropolita, katedralin'i Santiago de Chile - Santiago
Adiresy: Plaza de Armas, Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile;
Pejy Ofisialy: iglesiadesantiago.cl;
Telefaonina: +56 2 2787 5600;
Vita ny fanorenana: tamin'ny 1800.
Iray amin'ireo fiangonana katolika Shiliana ny Katedraly Santiago, izay miorina ao afovoan-drenivohitra. Ny reniranon'ny pilgrims dia tsy mihena hatramin'ny fotoana nanorenana azy. Mpizaha tany an'arivony isan-taona no tonga hijery ny fiangonana, ary mahaliana ihany koa ny tantaran'ny tanàna. Ny rafitra iray mahavariana dia antokom-panandramana ara-tsimia, izay ahitana ny lapan'ny arseveka sy ny tempoly mihitsy.
Cathedral - famaritana
Ny katedraly tao Santiago de Compostela dia nomena ny loham-pirenena, izay nomena azy tamin'ny 1951. Ny toetra mampiavaka ny tempoly dia ny fanoloran-tenany ho amin'ny Fihavian'ny Ziraly Masina.
Ny fiangonan'i Santiago de Compostela dia manana ny endriny amin'ny endriny, izay toy izao manaraka izao. Tsy nisy trano iray teo amin'ny toerany, ilay iray natsangana ankehitriny, dia ny fahadimy amin'ny andalana. Ny trano teo aloha dia niaritra tranga mampalahelo: naringana noho ny horohoron-tany na ny afo.
Ny tranobe vaovao dia natsangana tamin'ny taona 1748 teo ambany fitarihan'ilay mpanao famoronana malaza Butler Mathias Vasquez Akuna. Ny hevitra fototra nofinidy nandritra ny fananganana dia ny fananganana tempoly azo antoka, izay hanoherana ny horohoron-tany. Vokatry ny asa manahiran-tsaina nataon'ireo tompon'andraikitra, dia nisy fiangonana iray izay nanana fasana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tamin'ny 1846 no nanapa-kevitra ny hanorina ny trano lehibe iray amin'ny trano fiangonana, ny fahamendrehana amin'ny famoronana ny azy dia an'ny Eusebio Celly.
Tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha XIX, tamin'ny fandraisan'i Arzantiniana Mariano Casanova, ny katedraly St. James avy ao Santiago de Compostela dia niova andiam-panovana, izay niasan'ny architect Ignacio Cremones:
Ny endrika dia endrika firaiketana avy any Tuscan sy Romanina;
Ny endriky ny tafo dia manana tarehim-barim-pasika ary manohana azy manokana;
teo anoloan'ny alitara, nanitatra ny toerana ho an'ny mpino, ary ity ampahany ity dia novolavolain'ny choir. Ny alitara dia natao tamin'ny 1912 tany Munich, satria fitaovana nampiasaina marbra sy menaka fotsy;
Ny fiangonana dia voaravaka amin'ny singa manan-danja amin'ny endriny: saribao manan-danja, stucco miora, gilding, frescoes;
Ny tempoly dia mizara ho toy ny tena zavakanto ara-javakanto: toy ny kômpia kely izy ireo, fa misaraka amin'ny arse;
Ny mason-tsivana dia fomba iray hamokarana izay mahazatra ampiasaina;
Ankoatra ny tilikambo iray, dia natao ny roa, izay nizarazara ny fasana teo an-tampony. Voahodidina ny sarivongan'i Md John, Maria Virjiny sy Md. Roch.
Ny fanorenana indray ny katedralana dia natao tamin'ny taona 2005, rehefa nanangana trano fiangonana kely sy krypta vaovao. Tamin'ny taona 2010 dia rava indray ilay trano. Namaly izany ny governemanta Shiliana ary nanomboka tamin'ny famerenana tamin'ny laoniny tamin'ny taona 2014.
Sarobidy ho an'ny taranaka ho avy
Ho an'ireo mpizahatany, ny fiangonana ao Santiago de Compostonel no teboka fanombohana ahafantarana ny tanàna, ary ho an'ny mpizaha tany dia ny tanjona farany amin'ny dia lavitra mankany Santiago . Ny mpizahatany rehetra mankalaza ny hery matanjaka avy amin'ny trano. Ny lanjany ara-pivavahana lehibe indrindra amin'ny tempoly dia noho ny zava-misy fa ny sisa tavela amin'ireo Eveka sy archbishop of Santiago.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Katedraly?
Ny katedraly dia mora hita, miorina ao afovoan-tanànan'i Santiago izy, ireo zavatra manan-danja toy ny Plaza de Armas sy ny Ben'ny Tanàna Plaza dia manompo.
Ahoana no fisotroana sotro maimai-poana?
Pita avy amin'ny mofo pita
Fitafiana ho an'ny vehivavy madinika
Sakamalao misy perla
Ny maso mitsitsy Midratsil
Oligomenorrhea - inona io?
Fitafiana fahavaratra ho an'ny matavy
Salmon tartar - 8 fomba niavaka hanomanana lovia mahafinaritra
Mitondra vavahady amin'ny tananao manokana
Ilay mpaka sary dia nametraka ireo zazakely teo amin'ny sangan'asa malaza, ary tena mahafatifaty be io!
Ahoana ny fomba hametrahana lavaka amin'ny gorodona?
Channing Tatum sy Jenna Devan dia nampiseho ny fomba nandaniany ny fialantsasatra tany Hawaii
Hodia ho an'ny vehivavy matavy - ireo modely tsara indrindra sy ny fomba fitafy?